Brands, Colors uye Emotion | Martech Zone
Ndiri mucherechedzi we ruvara infographic uye izvi infographic kubva kuThe Logo Kambani yakanaka.
Masayendisiti anga achidzidza maitiro atinoita kumavara kwemakore mazhinji. Mamwe mavara anoita kuti tinzwe neimwe nzira nezve chimwe chinhu. Chero bedzi mugadziri achiziva kuti aya mavara uye manzwiro ndeapi, iye mugadziri anogona kushandisa iro ruzivo kubatsira kubatsira kuburitsa bhizinesi nenzira kwayo. Iyi haisi yakaoma uye inokurumidza mitemo asi vakangwara vagadziri vanoshandisa ruzivo kune vatengi vavo mukana. Iyi inonakidza infographic inoisa kunze manzwiro uye hunhu izvo zvinonyatso kuzivikanwa mhando senge kuzivikanwa nezvayo. Iyo color psychology ingori chikamu chimwe chete chepuzzle asi ini ndinofunga iwe unobvuma icho chikamu chakakosha kwazvo zvacho.